उडी रहेको बेला २४१ जना बोकेको अमेरिकी विमानमा आगो लाग्यो, मानव बस्तीमा खसे विमानका टुक्रा!! – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /रोचक/उडी रहेको बेला २४१ जना बोकेको अमेरिकी विमानमा आगो लाग्यो, मानव बस्तीमा खसे विमानका टुक्रा!!
उडी रहेको बेला २४१ जना बोकेको अमेरिकी विमानमा आगो लाग्यो, मानव बस्तीमा खसे विमानका टुक्रा!!
अमेरिकाको युनाइटेड एयरलाइन्सको विमान युए ३२८ को इन्जिनमा विमान उडिरहेको समयमा आगो लागेको छ । आगो लाग्दा विमान १५ हजार फिटको उचाइमा उडिरहेको थियो । दुर्घटनापछि बोइङ ७७ विमानका ठूला–ठूला टुक्रा मानव बस्ती भएको क्षेत्रमा खस्न थाले । यद्यपि विमानको आकस्मिक अवतरण गरिएको छ र मानवीय क्षति हुन पाएको छैन ।
सीएनएनको रिपोर्टअनुसार दुर्घटनामा विमानमा भएका कुनै पनि यात्रुलाई केही भएको छैन । विमानका टुक्रा जमिनमा खस्दा त्यसले लागेर पनि कसैलाई केही भएको छैन । इन्जिनमा तीब्र आगो लागेपछि यात्रीहरु भने आतंकित भएका थिए । विमानमा सवार यात्रुहरुका अनुसार इन्जिनमा आगो लागेपछि यात्रुहरुले विमानभित्र निकै गर्मी महसुस भएको बताएका छन् । यो विमान अमेरिकाको डेनभरबाट उडेर हवाइ जाँदै थियो ।
डेनभरबाट उडेको केही समयमै विमानको इन्जिनमा विष्फोट भएको थियो । तत्कालै विमानलाई फर्काएर डेनभरमै आकस्मिक अवतरण गराइएको थियो । अमेरिकाको कोलोराडोको बस्ती भएको क्षेत्रमा विमानका ठूला ठूला टुक्रा खसेका थिए । घटना स्थानीय समयअनुसार शनिबार दिउँसो भएको थियो । विमानमा २३१ यात्रु र १० क्रु सदस्य थिए । एयरलाइन्सका एक प्रवक्ताले वमान उडेको केही समयमै इन्जिन फेल भएको बताएका छन् ।
धिरेन्द्र शाहकी कान्छी छोरी यसरी प्रेमीसँग रोमान्स गर्दै, वेडरुमका नितान्त व्यक्तिगत तस्बिरहरू बाहिरिए